Kushanya Kwemuchato: Kufema Hupenyu Hutsva muKufamba uye Kushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Kushanya Kwemuchato: Kufema Hupenyu Hutsva muKufamba uye Kushanya
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Musika weKuronga Muchato uri kuwedzera, uye inogona kungova iyo niche yekushanya inodiwa kumutsiridza indasitiri yekufambisa mushure medenda.
Musika wepasi rose Wedding Planning unotarisirwa kukwira pamwero mukuru panguva yekufanotaura, pakati pa2021 na2025.
Muna 2021, musika weWedding Planning wanga uchikura pamwero wakadzikama.
Nekuwedzera kuri kuita kutorwa kwemaitiro nevatambi vakakosha, musika unotarisirwa kukwira pamusoro peinofungidzirwa horizon.
Nancy Barkley, Murongi weMuchato Tourism nokuti World Tourism Network (WTN) yanga ichikurudzira kuti Wedding Tourism inoda kuremekedzwa zvakanyanya sezvo yakakosha kuhupfumi hwenzvimbo. Anoombera Market Watch Newsroom nekuisa izvi pachikamu chavo chechangobva kubuda, "Wedding Planning Market 2021 Global Share, Size, Future Demand, Global Research, Top Leading Players, Emerging Trends, Region by Forecast kusvika 2025."
Mukutanga kwa2020, chirwere cheCCIDID-19 chakatanga kupararira pasirese, mamirioni avanhu pasi rese akatapukirwa nechirwere cheCCIDID-19, uye nyika huru dzepasirese dzakateedzera kurambidzwa kwetsoka uye mirairo yekumisa basa. Kunze kwezvigadzirwa zvekurapa uye maindasitiri ezvigadzirwa zvinotsigira hupenyu, maindasitiri mazhinji akakanganiswa zvakanyanya, uye maindasitiri eBenomyl akakanganiswawo zvakanyanya.
Mushumo weGlobal "Wedding Planning Market" (2021-2025) inovhara data yevagadziri, kusanganisira kutumira, mutengo, mari, purofiti, rekodhi rekubvunzurudza, kugovera bhizinesi, nezvimwe, izvo zvinobatsira mutengi kuziva nezvevanokwikwidza zviri nani. Chirevo ichi chinobatawo matunhu ese uye nyika dzepasi, iyo inoratidza mamiriro ebudiriro yedunhu, kusanganisira saizi yemusika, vhoriyamu, uye kukosha, pamwe nemutengo data.
Pamusoro pezvo, mushumo uyu unovharawo chikamu che data, chinosanganisira chikamu cherudzi, chikamu cheindasitiri, chikamu chechiteshi nezvimwe zvinovhara saizi yemusika wemusika, zvese vhoriyamu uye kukosha. Iyo zvakare inovhara akasiyana maindasitiri ruzivo rwemutengi, iyo yakakosha kune vanogadzira.
Global "Wedding Planning Market" (2021-2025) inopa mamiriro uye tarisiro yekukura kwepini-point yekuongorora yekuchinja makwikwi masimba uye tarisiro yekumberi pazvinhu zvakasiyana zvinotyaira kana kudzora indasitiri kukura. Musika Wekuronga Muchato unopa ongororo yakadzama yehukuru hwemusika, mugove, kukura, chiyero, uye tarisiro yematarisiro eiyo Wedding Planning indasitiri. Chirevo ichi chinopa ruzivo rwese rwakakosha rwunodiwa kuti unzwisise zvakakosha mukushandiswa kwemusika mumusika weKuronga Kwemuchato uye mafambiro ekuwedzera echikamu chimwe nechimwe uye dunhu. Chidzidzo ichi chinogovera Wedding Planning musika kuita zvese maererano nehuwandu nemari uye ichi chinhu chinobatsira uye chinobatsira bhizinesi. Tora muenzaniso wePDF yemushumo.
Kuziva Maitiro eCCIDID-19 Pandemic Ichakanganisa Musika Wekuronga Muchato / Indasitiri, kumbira muenzaniso kopi yemushumo.
Nezve World Tourism Network
World Tourism Network (WTN) inzwi rakareba-refu rekufamba-famba uye mabhizinesi ekushanya kutenderera pasirese. Nekubatanidza kuedza, zvinounza pamberi izvo zvinodikanwa uye zvishuwo zvemabhizinesi madiki nepakati nepakati uye vanobatana navo. World Tourism Network yakabuda munhaurirano yekuvakazve.travel. Hurukuro yekuvakazve.yekufamba yakatanga munaKurume 5, 2020, padivi peITB Berlin. ITB yakanzurwa, asi rebuilding.travel yakatangwa paGrand Hyatt Hotel muBerlin. Muna Zvita, rebuilding.travel yakaenderera mberi asi yakagadzirwa mukati mesangano idzva rinonzi World Tourism Network. Nekuunza pamwe nhengo dzakazvimirira uye dzeveruzhinji pamapuratifomu edunhu neepasirese, WTN haingomiriri nhengo dzayo chete asi inovapa izwi pamisangano mikuru yekushanya. WTN inopa mikana uye yakakosha network kune nhengo dzayo munyika dzinopfuura zana nemakumi maviri. Dzvanya pano kuti uve nhengo.